ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံ သှားကာ ကုသိုလျပွု လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောယှနျးယှနျး – 7Day Update News
ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံ သှားကာ ကုသိုလျပွု လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောယှနျးယှနျး
ပရိတျသတျတှအေားလုံးရဲ့ အသညျးကို ဖမျးစားထားနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ယှနျးယှနျးဟာ မကျြစိအရှတေ့ငျ ကလေးသရုပျဆောငျဘဝလေးကနေ အပြိုဖားဖားကွီးဖွဈကာ အလှကွီးလှလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ သူမကို စပွီး သတိထားမိခဲ့ကွတာကတော့ နကျမှောငျပွီး ဖွောငျ့ဆငျးတဲ့ ဆံကသောကွီးကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ ယှနျးယှနျးလေးက ခတျေနဲ့အညီ ဆံနှယျရှညျတှကေို အရောငျဆိုးကာ ဖွူစငျလှပတဲ့ သူမရဲ့ အသားအရညျနဲ့ လိုကျဖကျမှုရှိနကော တဈမြိုးလေး လှနပွေနျပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ယှနျးက ကွျောငွာရိုကျကူးရေးတှကေို အဆကျမပွတျ လကျခံရိုကျကူးလြှကျရှိနပွေီး အရှယျနဲ့မမြှအောငျ အလှူအတနျးတှကေိုလညျး ရကျရောစှာ လုပျကိုငျလြှကျ ရှိနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ မိသားစုကိုလညျး အခြိနျပေးကာ အမွဲလိုလို ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို တှရေ့ပါတယျ။
ခုတဈခါမှာ‌တော့ ယှနျးယှနျးလေးက ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံမှ မမဗိုကျတှဆေီ အလညျသှားကာ ကုသိုလျလေးတှေ ပွုလုပျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။ ယှနျးလေးက “ဒီတဈခေါကျတော့ မမဗိုကျတှဆေီရောကျဖွဈတယျ.. ?✉️ခုခြိနျမှာ ကလေးလေးမှေးဖို့ဆေးရုံတကျရတာတောငျ အထီးကနျြပါတယျ လူနာစောငျ့တှအေမြားကွီးနခှေငျ့မရပါဘူး မှေးခါနီးမှပေးလာတယျပွောတယျ!! လှူစရာနရောတှစေဉျးစားတဲ့အခါ “ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံ” လေးလဲသှားလို့ရပါတယျလို့ ☺️??”လို့ဆိုကာ အကွံပွုစကားလေးတှပေေးကာ ကုသိုလျယူခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Source; Yoon Yoon
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ သွားကာ ကုသိုလ်ပြု လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောယွန်းယွန်း
ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးရဲ့ အသည်းကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ယွန်းယွန်းဟာ မျက်စိအရှေ့တင် ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝလေးကနေ အပျိုဖားဖားကြီးဖြစ်ကာ အလှကြီးလှလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမကို စပြီး သတိထားမိခဲ့ကြတာကတော့ နက်မှောင်ပြီး ဖြောင့်ဆင်းတဲ့ ဆံကေသာကြီးကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ယွန်းယွန်းလေးက ခေတ်နဲ့အညီ ဆံနွယ်ရှည်တွေကို အရောင်ဆိုးကာ ဖြူစင်လှပတဲ့ သူမရဲ့ အသားအရည်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိနေကာ တစ်မျိုးလေး လှနေပြန်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ယွန်းက ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေကို အဆက်မပြတ် လက်ခံရိုက်ကူးလျှက်ရှိနေပြီး အရွယ်နဲ့မမျှအောင် အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောစွာ လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ မိသားစုကိုလည်း အချိန်ပေးကာ အမြဲလိုလို ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
ခုတစ်ခါမှာ‌တော့ ယွန်းယွန်းလေးက ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှ မမဗိုက်တွေဆီ အလည်သွားကာ ကုသိုလ်လေးတွေ ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းလေးက “ဒီတစ်ခေါက်တော့ မမဗိုက်တွေဆီရောက်ဖြစ်တယ်.. ?✉️ခုချိန်မှာ ကလေးလေးမွေးဖို့ဆေးရုံတက်ရတာတောင် အထီးကျန်ပါတယ် လူနာစောင့်တွေအများကြီးနေခွင့်မရပါဘူး မွေးခါနီးမှပေးလာတယ်ပြောတယ်!! လှူစရာနေရာတွေစဉ်းစားတဲ့အခါ “ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ” လေးလဲသွားလို့ရပါတယ်လို့ ☺️??”လို့ဆိုကာ အကြံပြုစကားလေးတွေပေးကာ ကုသိုလ်ယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုရိသတှအေကွိုကျ Samusa application ကို အသုံးပွူပွီး...
ခဏလေးနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေကို အန္တရာယ်ရှိကြောင်း...